Sida loo sameeyo alaarmiga taleefankayga iPhone | Wararka IPhone
Markii aan ogaaday inay jiraan baaritaanno badan oo ku saabsan iPhone News oo la xiriira sida loo sameeyo alaarmiga taleefankayga iPhone-ka, Waan yaabay. Aniga ahaan, macruufka 'iOS' waa nidaam aad u macquul ah oo aan isticmaali jiray dhowr sano, marka tani aniga waxay ila muuqataa aniga, laakiin waan fahmi karaa in qof walbaa uusan si fiican ula socon macruufka sida aan sameeyo. Marka, waxaan sharaxayaa talaabooyinka fudud ee ay tahay inaan raacno si aan ugu hagaajino alaarmiga laba siyaabood oo kala duwan, iyo sidoo kale qaabeynta ku celcelinta oo aan tusayo qoraal.
Si aan u dhigno digniin ku saabsan iPhone-ka waa inaan isticmaalnaa caqliga saliimka ah. Qalab noocee ah ayaan badanaa ku dhejinaa alaarmiga? On saacadaha. IOS waxay leedahay a Barnaamijka saacadda in, marka lagu daro saacadda-saacadda, waqtiga adduunka iyo saacadda, waxay, runtii, garaaci kartaa waqtiga aan weydiisanno. Si aad gacanta ugu dhigto alaarmiga, waa inaad raacdaa tillaabooyinka aad leedahay boodka ka dib.
1 Sida digniinta gacanta loogu dejiyo
2 Sida loo sameeyo alaarmiga Siri
Sida digniinta gacanta loogu dejiyo
Sida digniinta looga dhigo iPhone.
Waxaan fureynaa arjiga Daawo.
Waxaan u soconaa Digniin.
Waxaan taabaneynaa astaanta Ku dar (+).
Waxaan u dhaqaaqeynaa waqtiga ilaa aan ka gaarno midka aan rabno in nala ogeysiiyo. Dhinaca bidix saacadaha ayey ku wareejisaa dhanka midigna daqiiqadaha ayey ka duubtaa.
Waan ciyaarnay ilaaliye.
Ikhtiyaari: haddii aan rabno inaan qoraal dhigno, waxaan ku ridi doonaa qoraalka «Label» in aan rabno in naloo muujiyo. Waxaan sidoo kale dooran karnaa codka, oo ay ku jirto hees, taas oo na tusaysa ikhtiyaarka dib u dhigista si ay mar kale u ciyaarto mar dambe iyo haddii aan rabno in lagu celiyo maalmo cayiman. Si loo soo celiyo, waxaan si fudud u calaamadeyn doonnaa maalinta usbuuca aan dooneyno inay ka dhawaajiso adoo taabanaya.
Sida loo sameeyo alaarmiga Siri
Calan digniin la samee Siri
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxaa lagu fududeyn karaa mahad badan Siri. Haddii aan rabno inaan yeelno alaarmiga, kaliya waa inaan u sheegno Siri, tusaale ahaan, "Qaylo-dhaan berri markay tahay 10-ka subaxnimo" waxayna si toos ah u dejin doontaa alaarmiga waqtiga aan weydiisannay. Laakiin, haddii, sida aad ku aragtay sawirkii hore, waxaan kaa codsaneynaa inaad dejiso alaarmiga oo leh qoraal gaar ah. Tusaale ahaan, haddii aan nidhaahno "deji nambarka hadda socda ee iPhone 8:30" wuxuu ku dhawaaqi doonaa digniin qoraal ah, sida midka sawirka ku yaal bilowga maqaalka.
Macluumaad dheeraad ah, maadaama aan ka hadlayno saacadda iyo digniinta, haddii aan isticmaalno saacadda, waxaan u qaabeyn karnaa inay joojiso muusikada dhammaadka tirinta, taas oo wanaagsan in laga fogaado hurdada iyo in muusikada ciyaarayaa waqti dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo sameeyo alaarmiga taleefankayga iPhone-ka
Sidee nacasnimo u tahay qoraalkan ...
Ku jawaab AZTOR
Harag adhi dijo
Hadda waxaa jira qoraal kale oo ku saabsan sida kor loogu qaado loona yareeyo mugga taleefanka iPhone-ka waxaanan leenahay buug-gacmeed naxariis-daran
Ku jawaab Zalea
Waa maxay musiibada ... waan ka sii daraynay.
Kujawaab Tuca Moton
Dadkaas aan aqoon sida loo sameeyo mid ka mid ah taas ma yaqaanaan sida loo galo balooggan ama inuu jiro
Anigu ma fahmin faallooyinka xun, xaqiiqdii waa waxyaabo aan ognahay laakiin ma xuma in la xusuusto waxaana hubaal ah inay had iyo jeer jiraan dad adiga kuu wanaagsan ...
Mana u maleynayo in faallooyin badan oo xun ay wax badan ka tarayaan….
Shaqada tifaftirayaasha waa in la qiimeeyaa
Ku jawaab avegalf
Waad salaaman tihiin, avegalf 😉 waan fahmay, laakiin dabcan ma wadaago. Casharradan, oo sida muuqata inteena badan u eg, waxaa loo abuuray maxaa yeelay waa la raadiyaa. Waxaa la sheegay in dadka aan garaneyn sida loo sameeyo alaarmiga ma galaan blogkan ama ma ogaadaan inuu jiro, laakiin si xiiso leh waxaa jira baaritaanno noocan ah oo diiwaangashan.
Maqaalkani / casharkani wuxuu noqon doonaa doqon sida 90% aaminsan yihiin, laakiin waxay jawaab u tahay baaritaankaas.
Tuntunada maalinta !!!!!
Hagaag, maqaalku ma xuma haba yaraatee, waxaa jiri doona kuwa kufiican iyada iyo kuwa aan sameyn doonin. Laakiin aniga ahaan, Apple ayaa dooran kara Siri inay kuu sheegto qoraalka aad qortay iyo dhacdooyinka, ballamaha iyo xusuusinta aad haysato maalintaas (aan u tagno ajandaha), marka lagu daro macluumaadka cimilada, iyo sidoo kale isdhexgalka dheeraad ah oo la Siri iyo ma aha oo kaliya in la weydiiyo su'aalo Tani tusaale ahaan, waxaa jiri doona kuwa u arka inay tahay dibi dhac laakiin markii aad caado u yeelato kala badh hurdada waxaad ogaanaysaa jadwalkaaga maalinta, maxaa yeelay waa wax si fiican u socda, wax soo saar badan ayaad leedahay. Haddii kale waa barnaamij qaylo-dhaan oo dhammaystiran.
Ka hor Samsung, barnaamijkeeda qaylo-dhaanta ayaa sidaas ahaa oo waliba wuxuu kuu akhriyay cinwaanada wararka muhiimka ah, ikhtiyaar ahaan in dhadhankeyga uu xoogaa aan loo baahnayn, laakiin ma ogi sababta ay uga kaxeeyeen Spain.
Sidaa darteed waxaad ku dhejin kartaa alaarmiga xulashadan iyo mid kale oo leh heesta aad ugu jeceshahay. Ma garanayo haddii noocyadii hore ee iOS ay jirtay.
War wanaagsan: qiimaha iPhone 6s ma kordhin doono